laacib » Hordhac: Real Madrid vs Tottenham Hotspur: Spurs Oo Tijaabo Adag Mareysa, Bale Oo Aan Ka Hor Imaan Karin Kooxdiisii Hore & Xogta Kulanka.
Hordhac: Real Madrid vs Tottenham Hotspur: Spurs Oo Tijaabo Adag Mareysa, Bale Oo Aan Ka Hor Imaan Karin Kooxdiisii Hore & Xogta Kulanka.
Real Madrid ayaa gurigeeda kusoo dhaweyneysa Tottenham Hotspur iyadoo labada kooxood ay ku dagaalamayaan hogaanka group-ka H, madama ay dhibco wadaag yahiin sidoo kalana ay wadagaan farqiga goolasha.
Los Blancos waxey si dhib yar uga soo gudubtay Apeol Nicosia iyo Borrusia Dortmund, halka Spurs ay iyana qaaday wadadaas oo kale, caawa ayaa midkood la filayaa inuu la wareego hogaanka, walow ay suuragal tahay iney dhibcaha kala qeybsadaan.
Kulanka: Real Madrid vs Tottenham Hotspur
Real Madrid: Zidane ayeysan suuragal u aheyn inuu u waco Gareth Bale si uu u wajaho kooxdisii hore madama uu wali ku guda jiro kasoo kabsashada dhaawaciisa.
Keylor Navas ayaa dib ugu soo laabanaya Real Madrid, sidoo kalana Isco iyo Modric ayaa la filayaa iney kusoo bilowdaan kulanka caawa madama ay kursiga kusoo bilowdeen kulankii Getafe.
Tottenham Hotspur: Pochettino wuxuu rajeynayaa inuu soo laabto Ben Davies, sidoo kale Son Heung-Min ayey suuragal tahay inuu shaxda dhanka weerarka kasoo muuqdo.
Real Madrid ayaan wax guuldaro ah kala kulmin Tottenham Hotspur, afar jeer ayey is arkeen, sadex guul iyo 1-barbaro ayey ka heysataa.
Barbarahii ay xilli ciyaareedkii hore gurigeeda kula gashay Dortmund ayaa ah marka kaliya oo ay Los Blancos ku fashilantay iney gurigeeda guul ku gaarto 13-kii kulan ee ugu dambeeyay tartanka yurub.
Real Madrid kaliya 1-jeer ayey guuldaro la kulantay 37-dii kulan ee ugu dambeysay oo ay tartanka yurub ku ciyaartay gurigeeda, 32-jeer guul ayey gaartay, marka ay qasaareen waa kulan ay 4-3 guuldro ah kala kulmeen Schalke 2014/2015.
Real Madrid ayaa soo afjartay nolosha Spurs ee Champions League xilli ciyaareedka 2010/2011, markaas oo 4-0 lagu suldaaray kulankii lugta hore oo ay booqdeen Madrid.